NetEnt ay ciyaareyso ay u dabaal ay 20-kii dhalashadii oo waxaa la soo bandhigid qaar ka mid ah naadi cusub oo feature-hodan mobile online ee taxanahan NetEnt Rock. Guns N Roses got a huge response from the players and now is the time to check out Jimi Hendrix, brand ciyaarta booska cusub ee ay ciyaareyso ay NetEnt.
Tani ciyaarta booska mobile cajiib ah ayaa la sii daayo on 22 April, 2016. Waxaa ciyaar cajiib ah by NetEnt ka go'an in ay muusikiiste weyn ee 1960. Haa, waxaan ka hadleynaa ahayn muusikiiste halyeeyga Jimi Hendrix ma jiro. Kulankaan ayaa naqshadeynta il-qabad, celshaan muuqaalada bonus oo soundtracks ugu fiican ee Jimi Hendrix. Aynu xaqiiqda qaar badan oo ku saabsan this ciyaar madadaalo lacag caddaan ah fantastic.
Game ee theme iyo ciyaarta play soo muuqdo:
Jimi Hendrix Afyare noqon doonaa 5 a×3 ciyaarta booska ku ambadeen wax la 20 Khadadka bet go'an. Kulankaan ayaa ku siin doonaa boosteejo ah oo fiican in la muuqaalada wareejin free badan ciyaaro. Ciyaartoyda ka qaadan kartaa hab fiican si ay u guuleysan xaddi weyn. Intaa waxaa dheer, waxaa jira laba qaababka cusub bonus soo bandhigay by NetEnt in uu sare u xiiso ciyaaryahan ee ciyaarta.
theme The waa mid cajiib ah sababtoo ah waxa ay u muuqataa sida style theme 60 'Retro. Iyo guduud, iyo casaan jeeda midab, -Fasalka sare sawiro 3D iyo soundtracks caanka Jimi Hendrix ayaa ka dhigi kulankaan super xiiso leh. The symbols are perfectly designed for the theme; ay ka mid kabanka cad, kabanka cas, Jimi Hendrix, ubax, calaamadaha nabad iyo quluubtoodu. Dhamaan iyaga ka mid yihiin calaamadaha-qiimaha sare, oo waa inaad dalka intii lagu wareejin kasta inuu ku guuleysto qaar credits weyn.
dhigeeysa Free iyo muuqaalada bonus:
feature The wareejin oo lacag la'aan ah ciyaarta booska Jimi Hendrix noqon doontaa arrin la mid ah bonus feature wheel of Qoryaha N GUUSHII. Waxaa laga yaabaa inaad hesho mid ka mid ah muuqaalada wareejin free hoos ku siin:
Xiisaha Traffic: ciyaarta la ayaa kuu abaalgudi doona 6 dhigeeysa free oo ay weheliyaan qaar ka mid ah wilds for guul weyn.
garabka Little: Land 3 iyaga oo halkaas waxaad ugu tegi la dhigeeysa aad free. Waxaad ka heli kartaa 6 in 12 oo iyaga ka mid.
Purple Boor: Ciyaaryahanka ayaa qaadan doona 6 in 12 dhigeeysa xor ah oo waxaa jiri doona wilds carceero guduudan ku wareejin kasta.
abaalmarinta qadaadiic: Waxaad u ururiyaan qadaadiic ah, aad ku jirto qaar ka mid ah loo laablaabi random. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waxay noqon kartaa sida weyn sida 30x.
Dib-u-dhigeeysa iyo carceero guduud wilds random:
Astaanta duurjoogta ah dhulkii karaa ambadeen kasta iyo mar u matalo, taa ku badali karaa oo dhan calaamadaha haray iyadoo calaamad duurjoogta. Sidaas awgeed, ciyaaryahanka uu isku xigxiga oo wanaagsan ku guuleystay kulankii ka weyn. Laakiin ciyaarta ayaa maroojin ah. Caga afar ama ka badan kabanka casaan noqon karaan kuwo qabow, sababtoo ah sidaas aad ku guuleysan karto qaar ka mid ah dib-u-dhigeeysa. The kabanka Mire Waqaf oo waxay noqon doontaa dhegdheg iyo calaamadaha kale ee ku ambadeen wax ka miiqdaan doonaa. Waxaad ka heli kartaa isku xigxiga oo ka wanaagsan calaamadaha inuu ku guuleysto abaalmarinta darafkii kulankaan.
Waxay leedahay teori RTP ah 96.1%. Iyada oo qalloocinaya aad u badan ee play ciyaarta, ciyaartoy u sii heli karaa xiisaha adkeeyay. taxane Rock ayaa horay u dhiibay ciyaarta cabsi, Qoryaha N GUUSHII. Oo Jimi Hendrix waxa uu noqon doonaa ka weyn oo ka wanaagsan !